चेपुवामा ओलीः पार्टी निर्णय मान्ने कि विभाजन रोज्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
चेपुवामा ओलीः पार्टी निर्णय मान्ने कि विभाजन रोज्ने ?
२०७७, २६ कार्तिक बुधबार
समाचार टिप्पणी, काठमाडौं । सचिवालयका बहुमत सदस्यले सचिवालय बैठक बोलाउन बारम्बार माग गर्दा समेत आनाकानी गरेका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली चेपुवामा परेका छन् ।
सहमतिको प्रयासले सार्थकता नलिएको र आफ्नो पक्षमा समेत बहुमत जुटाउन नसकेपछि अध्यक्ष ओलीका अगाडि बहुमत पार्टीको निर्णय मान्ने या पार्टी विभाजन रोज्ने बाध्यता आइपरेको हो ।
यद्यपी अध्यक्ष ओलीले भने आफू यसअघि नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष भएकोले कमजोर नठान्न चेतावनी दिएका छन् ।
उनले यसो भनिरहेपनि पार्टीभित्र उनले पूर्व एमाले समुहलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत भने सफल हुन सकेको छैन ।
अध्यक्ष ओलीले पूर्व एमाले समूहका नेताहरुसँग बारम्बार छलफल गरेपनि उनको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै माधव नेपाल समूहका नेताहरुले प्रतिध्रुवी गठबन्धन बनाएका छन् ।
पार्टीको विधि र पद्दती मिचिनुमा ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नै मुख्य जिम्मेवार भएको माधव नेपालको ठहर छ ।
यसअघि सचिवालय बैठकको अनुरोध गरेको भोलीपल्ट ओलीले नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए । तर नेपालले भने पार्टीभित्रको संकटको जड ओलीको शैली र चिन्तन भएको बताउँदै आलोचना गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड–माधवको बटमलाईनः सरकारको समिक्षा, पार्टीमा ‘एक व्यक्ति एक पद’
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नेकपाका केही नेताहरुलाई शीतल निवास बोलाएर पार्टीमा एकताका पक्षमा लाग्न जोड दिएकी थिइन ।
यो बीचमा नै ओली पक्षका नेताहरुले खुमलटारमा समेत प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् ।
ओलीको जोड अध्यक्ष प्रचण्ड या माधव नेपाललाई एकलरुपमा फकाउन सके आफू बलियो हुनेमा रहेको देखिन्छ । तर प्रचण्ड–माधवहरुले भने पार्टीको कमिटिगत निर्णयमा जोड दिएका छन् ।
शीर्ष एक दुई जना नेतालाई मिलाउन सके सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने मानसिकता ओलीमा छ भने प्रचण्ड माधवहरुले स्थायी समितिका निर्णयहरु प्याकेजमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पछिल्लो विकसित परिस्थितिमा अध्यक्ष ओली यसै २७ गतेको बैठकमा उपस्थित नभएमा सचिवालयको बैठकले स्थायी समितिको बैठक डाक्ने औपचारिक निर्णय गर्ने सम्भावना बलियो छ ।
अहिलेसम्म ओलीले २७ गतेको बैठकका बारेमा केही बोलेका छैनन् । तर यसअघि स्थायी समितिका ५ जना सदस्यहरुको बैठक बसेपनि त्यसलाई औपचारिक बैठक भने उनीहरुले भनेका छैनन् ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा सचिवालय बैठकः कुनै निर्णय भएन, अर्को बैठक कहिले?
तर यदि अध्यक्ष ओली फेरी पनि बैठकमा आउन सहमत भएनन् भने २७ गतेको बैठक भने औपचारिक हुने प्रबल सम्भावना छ । यसो भएको खण्डमा ओलीकै शब्दमा ‘त्यो नेकपामा विभाजनको प्रस्थान बिन्दु बन्ने छ ।’ तर यो विभाजन ओलीले भनेजस्तो नभई पार्टी निर्णय मान्ने या नमान्नेबीचको चरम अन्तरविरोधको शुरुआतको अवस्था हुने छ ।
केपी ओली समूहले बहुमतले गरेको निर्णयलाई ‘गुटको निर्णय’ भन्ने सक्नेछन् । तर पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेको र प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार यसअघि नै दिइसकेको अवस्थामा पार्टी बहुमत सदस्यले गर्ने निर्णय ओली समूहले भने जस्तो ‘गुटको निर्णय’ मात्रै भने हुनेछैन ।
सचिवालयको बहुमतले पुनः स्थायी समिति बोलाउने, स्थायी समितिले निर्णय गर्ने र केन्द्रीय समिति बोलाउने र केन्द्रीय समितिले पनि बहुमतका साथ ओलीको आलोचना गरे भने ओलीका अगाडि निर्णय मान्ने या विभाजनमा जानेबाहेक अरु कुनै विकल्प रहने छैन ।
याे पनि पढ्नुस सङ्घीय सांसद पहाडीको निधन
स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको बहुमत रहेको छ ।
यद्यपी यो अवधि लामो हुनसक्ने भएकोले ओलीले त्यही बीचमा पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति सदस्यहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर बहुमत बनाउने कोशीस भने अवश्य नै गर्नेछन् । त्यसो त यो कोशीस उनले यसअघि पनि नगरेका भने होइनन् ।
पूर्व माओवादी समूहबाट केही स्थायी समिति सदस्यहरु प्रचण्डसँग रुष्ट भएपनि पार्टीको बहुमतले गर्ने निर्णय पालना गर्नैपर्ने निर्णायक अवस्थामा उनीहरुले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना भने कमै छ ।
ओली निकटका केही नेताहरुले परिस्थितिको आँकलन गरेर ओलीले बैठकको सामना गर्न ओलीलाई दबाब भने नदिएका होइनन् । अवस्था बिग्रिन नदिन र फूटको अपजस आफूमा आउन नदिन बैठकको सामना गर्नुपर्ने उनीहरुले ओलीलाई जोड दिएका छन् ।